Isku soo Bax balaaran oo lagu taageerayo Mesut Özil oo ay sameeyeen Taageerayaasha xulka Germany +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Isku soo Bax balaaran oo lagu taageerayo Mesut Özil oo ay sameeyeen Taageerayaasha xulka Germany +SAWIRRO
Taageerayaal Germany ah oo aad u fara badan ayaa isugu soo baxay bannaanka dhismaha Axel Springer iyagoo taageero u muujiyay xiddigga kooxda Arsenal ee Mesut Özil oo dhowaan isaga baxay xulka qaranka dalka Germany.
Dadkaan isugu soo baxay magaalada Berlin ayaa xirnaa maaliyado ay ku daabacanyihiin magaca Özil, sidoo kale waxa ay wateen boorar ay ku qoranyihiin hal ku dhigyo “waxaan ahay Özil”, halka ay kor u lulayeen calanka dalka Turkiga.
Kubbad qaabeeyaha Gunners ayaa eedeyn iyo cunsuriyad kala kulmay xulka Germany ka dib markii uu sawir la galay madaxweynaha dalka Turkiga ee Recep Tayyip Erdoğan, waana halka uu Özil kasoo jeedo asal ahaan.
Markii uu 29-jirkan ku dhawaaqayay ka fariisashadiisa xulka Jarmalka, waxaa hadalladiisa ka mid ahaa “waxaan ahay Germany marka aan guuleysanno, balse waxaan ahay qoxooti/muhaajir marka aan guuldarreysanno”, taasoo gilgishay qalbiyada dad badan.
Laacibkii hore ee Real Madrid ayaa qayb lixaad leh ka qaatay ku guuleysigii Germany ee Koobka Adduunkii lagu qabtay Brazil 2014, balse markii ay xulkiisa dhaafi waayeen heerka Groupyada koobka adduunka sanadkan ayaa dusha looga tuuray eedeymo iyo dhaleeeceyn badan.
Ciyaartoyda Arsenal iyo jamaajiirta Gunners ayaa si wanaagsan u garab istaagay xiddiggan, si la mid ah macallinkiisa cusub ee Unai Emery ayaa jacayl u muujiyay.
Mesut Özil ayaa uga mahad celiyay taageerayaasha Germany sida ay u garab istaageen iyo jaceylka u muujiyeen.